Ronaldinho Oo Talo Dhaxal-gal Ah Siiyey Mohamed Salah Oo Diiddan Inuu Heshiiska U Kordhiyo Liverpool - Laacib
HomeSuuqa Kala IibsigaRonaldinho Oo Talo Dhaxal-gal Ah Siiyey Mohamed Salah Oo Diiddan Inuu Heshiiska U Kordhiyo Liverpool
Ronaldinho Oo Talo Dhaxal-gal Ah Siiyey Mohamed Salah Oo Diiddan Inuu Heshiiska U Kordhiyo Liverpool
Halyeyga Brazil ee Ronaldinho ayaa usoo jeediyey xiddiga Liverpool ee Mohamed Salah, in uu hubiyo in uu faraxsan yahay, marka uu qaadanayo go’aanka mustaqbalkiisa xilli laacibkani uu ka warwareegayo inuu heshiis cusub u saxeexo kooxdiisa Liverpool.
Qandaraaska Salah ee Liverpool ayuu hal sano oo kali ahi ka hadhsan yahay, waxaana dhawr jeer la isku fahmi waayay dalab heshiis cusub oo ay kooxdu u bandhigtay, taas oo keentay in mugdi la geliyo mustaqbalka laacibkan ee Anfield.
29 jirkan oo sannadkii 2017 ay Liverpool kala soo wareegtay AS Roma ayaa 252 ciyaarood oo uu u saftay u dhaliyey 155gool, isaga oo xilli ciyaareedkanna ku guuleystay abaal-marinta xiddiga sannadka ee qoreyaasha kubadda cagta ‘Football Writers’ Player of the Year’.
Waxa kale oo uu Salah ku guuleystay abaal-marinta kabta dahabka ah ee Premier League oo ay wadaageen Son Heung-min oo uu mid walba dhaliyey 23 gool, waxaana uu Liverpool ka caawiyey inay ku guuleysato FA Cup iyo Carabao Cup, halka ay finalka Champions League Sabtida la ciyaari doonaan Real Madrid.
Halyeyga Brazil ee Ronaldinho oo booqday waddanka Masar ayaa la weydiiyey waxa uu kula talinayo Mohamed Salah, waxaanu ku jawaabay: “Ma waxaad i weydiinaysaan inaan kala taliyo mustaqbalkiisa? Waxa ugu muhiimsan waa in uu faraxsan yahay, kubadda cagtuna waa farxad, waana inaad faraxsanaato. Muhiimaddu ma aha kooxda aad u ciyaarayso mustaqbalka.”
Ronaldinho oo sii watay talada uu siinayo Mohamed Salah ayaa intaa ku daray: “Waa in uu kubadda cagta u ciyaaro si isaga farxad gelinaysa, sababtoo ah ma jirto wax ka wanaagsan kubadda cagta oo la ciyaaro.”